Iwo GOTY Makomborero 2019: Zvakanakisa Zvishandiso zveVhidhiyo Mitambo | Linux Vakapindwa muropa
Iwo GOTY Makomborero 2019: Zvakanakisa Zvishandiso zvekuvaka uye Kumhanya Mitambo paLinux
Ndakaverenga chinyorwa nezve kutamira kuLinux kubva kuWindows. Munyori akatarisa pane tarisiro yekugadzirisa iyo yaida kuitwa. Maererano naye, chimwe chezvinhu zvawaifanirwa kujairira, ndizvo izvo mitambo iripo ishoma. Handibvumirani. Mazita chaiwo anogona kunge asipo, kana chii yekusina de akakodzera madhiraivha e Hardware, rimwe zita rinogona kusashanda zvakare. Asi, zvirokwazvo hapana mashoma mitambo inowanikwa yeLinux.
Mutambo Wegore uchangobva kuvhota. Zviri ongororo yegore rega rega Kutamba PaLinux kukumbira vaverengi kusarudza yakanakisa muzvikamu zvakati wandei. Mune zvese pane vakawanda vanopedzisa.
Munyaya ino isu tinotarisa pane maturusi ekugadzira nekumhanya mitambo. Mune anotevera isu tinonyora vekupedzisira uye vanokunda mumapoka akasiyana.
1 Idzi ndidzo GOTY 2019. Zvakanakisa maturusi ekugadzira nekushandisa mavhidhiyo emavhidhiyo
1.1 Yemahara Software / Vhura Source Project
1.1.1 Proton (Winner)
1.1.3 Godot Injini
1.2 Favorite Reimplementation yeiyo Game Injini (Yemahara kana Vhura Source Software)
1.2.1 OpenMV (Winner)
Idzi ndidzo GOTY 2019. Zvakanakisa maturusi ekugadzira nekushandisa mavhidhiyo emavhidhiyo
Yemahara Software / Vhura Source Project
Valve yakapa zvakawanda kupfuura chero munhu nekuunza vatambi padyo neLinux. Iyo Steam chikuva inosanganisira akati wandei emahara uye akabhadharwa mazita emuno. Kana iri Proton, Iyo seti yetekinoroji inobvumidza iwe kutamba ako maWindows mazita uchishandisa iyo Steam mutengi weLinux.
Imwe yematambudziko nekutakura mitambo kubva paWindows kuenda kuLinux, ndizvo izvo matekinoroji anongowanikwa chete eiyi sisitimu yekushandisa anoshandiswa kwemifananidzo yemifananidzo. DXVK traduces mirairo yemitambo kuti inzwisiswe uye iitwe neakavhurika sosi giraidhi mifananidzo yezvishandiso.
Zviri nezve a seti yemidziyo inoita kuti zvive nyore kune mapurogiramu kugadzira 2d uye 3d mitambo
Kuenda kubva paWindows kuenda kuLinux uye kwete kunzwa nezvazvo chirongwa ichiZvakafanana nekugara kuMadokero kwemakore uye kusanzwa nezveCoca Cola, McDonald's kana Starbucks. Zviri pamusoro pakoChishandiso chinokutendera iwe kumhanyisa Windows kunyorera paLinux. Kunyangwe isingashande nemashandisirwo ese, zvinokwanisika kuishandisa neMicrosoft Office neAdobe zvinoshandiswa.
Pano tiri kutaura nezvechokwadi bhenji mubato rayo. Blender kwete chete haina kana chinhu chekuchiva kune chero mhinduro mhinduro. Iyo ndiyo sarudzo inosarudzika yevakawanda vemifananidzo uye vhidhiyo yemitambo yekugadzira nyanzvi nemakambani. Inosanganisira yakakwana suite yekusika uye mifananidzo ye2d uye 3d mifananidzo. Zvakare, inosanganisira vhidhiyo yekugadzirisa mabasa.
Favorite Reimplementation yeiyo Game Injini (Yemahara kana Vhura Source Software)
Ngatitangei nekutsanangura chinonzi injini yemutambo wevhidhiyo.
Tiri kureva seti yemapurogiramu anodzokororwa anoita kuti zvive nyore kugadzira, kugadzira, uye kumhanyisa mitambo yemavhidhiyo. Pakati pevamwe, inozadzisa mashandiro eanoratidzira, simulation, kubereka kwemisindo, nezvimwe.
Kana tichiti reimplement, tinoreva nyora injini dzemitambo kubva pakutanga kuita zvakaitwa nemamwe mainjini emitambo.
OpenMV Inogadzirisazve uye inowedzera iyo 2002 Gamebryo injini yemutambo-wekutamba mutambo Vakuru Mipumburu III: Morrowind. OpenMW inouya neyemupepeti wayo, unonzi OpenMW-CS, iyo inobvumidza mushandisi kugadzirisa kana kugadzira yavo mods kana yekutanga mitambo.
Es chikumbiro , que inokutendera kuti umhanye mamwe eakashambadzira ekushambadzira mazita kubva kumafaira edata. Izvo zvinogadziriswa hazvidiwe izvo zvinoita kuti iyo yekushandisa system iwe yauri kushandisa isinei. TOvanoti inotsigira (ine akasiyana madhigirii ekuenderana) angangoita mazana maviri nemakumi mashanu emazita ee LucasArts, Sierra On-Line, Revolution Software, Cyan, Inc. uye Westwood Studios situdiyo.
Ichi chirongwa regadzira uye uvandudze echinyakare Command & Kunda chaiyo-nguva nzira maseru mitambo. Yayo inoshanduka yakavhurika sosi yemitambo injini inopa yakajairika chikuva yekuvakazve uye kufungidzira yechinyakare 2D uye 2.5D RTS mitambo.
ZDoom es mhuri yekuvandudza kugadziridzwa kweinjini yeDoom kuti ishandiswe muzvirongwa zvemazuva ano zvekushandisa. Inoshanda paWindows, Linux uye OS X, uye inowedzera zvinhu zvitsva zvisingawanikwe mumitambo sekutanga zvakaburitswa neid Software.
OpenTTD es yakavhurika sosi yekunyepedzera mutambo unobva pane inozivikanwa Microprose mutambo "Wekutakura Tycoon Deluxe", yakanyorwa naChris Sawyer. Edza kutevedzera mutambo wekutanga zvakanyanya sezvinobvira uchiwedzera nemhando nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iwo GOTY Makomborero 2019: Zvakanakisa Zvishandiso zvekuvaka uye Kumhanya Mitambo paLinux
Yakanakisa Mitambo yeLinux 2019. Kubheja Pane Linux Readers 'Sarudzo
Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kutora mukana wekuchaja nekukurumidza kweiyo iPhone zvakare muLinux